Somali - FAQ
Iskuulka Onleenka ah ee MPS - Su'aalaha Inta Badan Qoysaska ay Naweydiiyaan
Laga bilaabo Sebtember 2021, MPS waxay bilaabaysaa Iskuulka Onleenka ah ee MPS kaas oo loogu talagalay ardayda ku jira dugsiga xanaanada carruurta ilaa fasalka 12aad. In kasta oo xulashada dugsiga onleenka ah ay heli jireen ardayda dugsiga sare sannado badan, isbeddelada xagga waxbaridda iyo waxbarashada ah ee ay keeneen cudurada faafa, MPS waxay dooneysaa inay xaqiijiso in xulashada waxbarashada onleenka ah ay heli karaan arday badan. Arday badan ayaa ku kobca waxbarashada onleenka ah.
Iskuulka Onleenka ah ee MPS wuxuu sidoo kale noqon doonaa xulashada ugu fiican ee ardayda iyo qoysaska haddii COVID-19 uu wali ku sii jiro bulshadeena sanad dugsiyeedka xiga ayna jeclaan lahaayeen inay kaqeyb galaan waxbarashada khadka tooska ah halkii ay kaqeybgeli lahaayeen waxbarashada qof ahaan looga xaadiro. Si kastaba ha noqotee, si ka duwan sida aan hadda ardayda u siineyno xulashada ah inay marar kala duwan kala doortaan waxbarashada qof ahaan looga soo xaadiro iyo waxbarashada khadka tooska ah, ardayda doorta Iskuulka Onleenka ah ee MPS ee sannadka soo socda waxay u baahan doonaan inay ku sii jiraan waxbarashada khadka tooska ah maxaa yeelay waxay luminayaan booska ay ku lahaayeen iskuulkooda bulshada ama magnetka. Haddii qoysasku beddelaan go’aankooda ku aadan dugsiga onleenka ah, waxay u baahan doonaan inay codsadaan iskuul cusub iyaga oo u marayo nidaamka cidsiga dugsiga. ee MPS. Taasi waxaa sabab u ah Dugsiga Onleenka ah ee MPS wuxuu la mid yahay iskuulada kale oo leh bulsho ka kooban arday, macalimiin, la taliyayaal, shaqaale bulsho iyo shaqaalaha kale ee taageerada.
Ka fiirso tilmaamaha qeexaya fasalada K12 halkaan.
Ardayda iska diiwaangeliya Dugsiga Onleenka ah ee MPS waxay heli doonaan macluumaad dheeraad ah kahor bilawga sanad dugsiyeedka cusub. Dugsiga Onleenka ah ee MPS wuxuu soo diri doonaa agab ay waalidiinta/daryeelayaashu isticmaali karaan si ay sida ugu fiican ugu diyaar garoobaan bilowga sanad dugsiyeedka.
1. Arday kasta oo MPS ka tirsan ee soo codsada miyuu gelayaa Dugsiga Onleenka ah ee MPS?
Dhammaan codsiyada dugsi ee waxbarashada guud iyo Goobaha Waxbarashada Gaarka ah ee Federaalka ee I iyo II waa la aqbali doonaa. Maaddaama qaybtaan la ballaariyey ee MPS Online-ka ay cusub tahay oo xiisaha aan hadda loo qabo aan la aqoon, codsiyada si dhow ayaa loola socon doonaa haddii ay dhacdo in shaqaalaha ama heerka soo codsashada ama aqbalaadda ay u baahan yihiin in wax laga beddelo. Meelaynta Ardayda ee Goobaha Federaalka III waxay u baahan doonaan inay maraan Waaxda Waxbarashada Gaarka ah--qoysasku waa inay lashaqeeyaan shaqaalaha kiiskooda si ay u eegaan in ardaygoodu awoodo inuu ka xaadiro Dugsiga Onleenka ah ee MPS.
2. Ardayda isla markiiba ma lagu wargelin doonaa aqbalaadda markay is diiwaangeliyaan?
Haa. Marka qoysasku buuxiyaan geedi socodka codsiga dugsiga ee onleenka ah, waxay heli doonaan jawaab otomaatik ah oo toos ah oo ay ku jiri doonaan tilmaamo ku aadan sida loo buuxin nidaamka diiwaangelinta dugsiga iyo waraaqaha la xiriira. Qoysasku sidoo kale waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay buuxiyaan codsiga dugsiga iyo nidaamka diiwaangelinta iyaga oo isticmaalaya foom warqad ah iyo boosta; la xiriir Qeybta Meelaynta Ardayda si ay boostada kuugu soo diraan foom: 612.668.1840 ama SPS.Department@mpls.k12.mn.us.
3. addii ardaygu rabo inuu iska diiwaangeliyo “waxbarashada khadka tooska ah” si uu u bilaabo sanadka, ardaygu ma inuu iska diiwaangeliyaa Dugsiga Onleenka ah ee MPS?
Haa. Wakhti xaadirkaan ma jirto xulasho kale oo waxbarashada khadka tooska ah; si kastaba ha noqotee, hadba sida sanad dugsiyeedka cusub uu u soo dhowaado, waxaan qiimeyn doonnaa heerarka infekshinka isla markaana waxaan dib u qiimeyn ku sameyn doonnaa xulashooyinka waxbarasho ee khadka tooska ah hadba sida loogu baahdo. Fiiro gaar ah: Mar alla markii ardayga laga diiwaangeliyo Dugsiga Onleenka ah ee MPS, wuxuu waayi doonaa booskii ay ku lahaayeen dugsigiisii ??hore ee MPS.
4. Ardayda la siiyo qadada bilaashka ah iyo qadada qiimaha jaban (FRL) miyey cunto ka heli doonaan Dugsiga Onleenka ah ee MPS?
Haa, cunnooyinka waxaa loo heli karaa ardayda u-qalma FRL. Ardaydu waxay heli doonaan cunto u dhiganta shan maalmood waxaana lagu ogeysiin doonaa waqtiyada iyo goobaha la qaadan karo.
5. Maamule miyuu yeelan doonaa Dugsiga Onleenka ah ee MPS?
Haa, Dugsiga Onleenka ah ee MPS wuxuu yeelan doonaa maamule dugsi oo shati buuxa haysta.
6. Ardaydu miyey fasalo qaar ah ka qaadan karaan Dugsiga Onleenka ah ee MPS laakiin sidoo kale waxay si qof ahaan ah uga xaadiri karaan iskuulada loo qoondeeyey?
Haa. Ardayda dhigata fasalada 9-12 waxay ku darsan karaan xulashooyinka koorsadooda iyagoo sidoo kale qaadanaya koorsooyin lagu bixiyo Dugsiga Onleenka ah ee MPS. Ardaydu waxay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan la-taliyahooda dugsiga sare si ay u sameeyaan qabanqaabooyinkan.
7. Ardaygu ma iska diiwaangelin karaa Dugisga Onleenka ah ee MPS ilaa dhawr toddobaad haddii ay ka maqnaan doonaan dugsiga sababo la xiriira inay aadayaan meel ka baxsan magaalada? Kawaran haddii ardaygu uu dibadda aadayo muddo dheer?
Maya. Haddii ardaygu u baahdo inuu ka maqnaado dugsigii loo qoondeeyey, qoysasku waa inay la xiriiraan dugsiga si ay ugala hadlaan maqnaanshaha la filayo si loo ogaado habka ugu wanaagsan ee ardaygu ula jaanqaadi karo casharradooda inta uu maqanyahay.
Ardayda dibada u safraysa ilaa muddo dheer, Dugsiga Onleenka ah ee MPS wuxuu u noqon karaa mid ku si loo buuxiyo baahidooda waxbarasho haddiiba ardaygu dib ugu soo noqon doono Minnesota kahor dhamaadka sanad dugsiyeedka. Si kastaba ha noqotee, ardaygu wuxuu u baahan doonaa in laga diiwaangeliyo Dugsiga Onleenka ah ee MPS wakhti buuxa oo waa in uusan ka xaadirin iskuul kale oo dibadda ku yaala isla waqtigaas.
8. Ardayda qaata Waxbarashada Gaarka ah ma iska diiwaangelin karaan Dugsiga Onleenka ah ee MPS?
Dugsiga Onleenka ah ee MPS wuxuu bixiyaa adeegyada Waxbarsho Gaar ah si loo sii wado buuxinta baahida ardayda. Waxaa jira adeegyada Waxbarashada Gaarka ah oo loogu talagalay ardayda waqtigooda ugu badan ku qaata waxbarashada guud iyo kuwa ubaahan taageerada goobta waxbarashada Gaarka ah. Taageerada Waxbarashada Gaarka ah waxaa laga heli karaa fasalka waxbarashada guud ama waxaa sidoo kale lagu bixin karaa fasalka Waxbarashada Gaarka ah ee khadka tooska ah. Ardaydu waxay heli karaan taageerada kaaliyaha waxbarashada gaarka ah ama waxay ku biiri karaan fasalka khadka tooska ah ee lagu bixiyo taageero qof-qof ah.
Waxaa jiri doona shaqaale bulsho oo waqti dhiman ka shaqeeya iskuulka kaas oo caawin doona ardayda dhigata Dugsiga Onleenka ah ee MPS. Shaqaalaha bulshada ee iskuulka, oo ay weheliyaan kooxda caafimaadka maskaxda ee iskuulka, ayaa la heli doonaa si ay taageerada caafimaadka maskaxda u siiyaan ardayda, iyo sidoo kale si ay la-talin u siiyaan shaqaalaha iyo qoysaska. Kooxdaan caafimaadka maskaxda ka shaqeysa (shaqaalaha bulshada ee iskuulka, lataliyaha iskuulka, dhakhtarka cilmi-nafsiga ee iskuulka, kalkaalisada caafimaadka iyo khabiirka caafimaadka maskaxda ee degmada) waxay caawin doonaan ardayda ku jirta barnaamijka waxbarashada khadka tooska ah. Kooxdaani waxay bixin doonaan taageero heerar kala duwan ah sida taageerada fasalka, taageerada kooxda iyo taageerada shaqsiyeed, hadba sida loogu baahdo iyo sida loo helo.
9. Ardayda Barata Ingiriisiga ma iska diiwaangelin karaan Dugsiga Onleenka ah ee MPS?
Haa. Dugsiga Onleenka ah ee MPS wuxuu shaqaalayn doonaa macalimiinta ESL si ay ugu adeegaan fasalada K-12. Intaa waxaa sii dheer, shaqaalaha taageerada labada luuqadood ku hadla ayaa sidoo kale la diyaarin doonaa si ay u caawiyaan ardayda.
10. Ardaygu ma iska diiwaangelin karaa Dugsiga Onleenka ah ee MPS haddii laga eryey, uu haysto wareejinta maamulka dugsiga, ama uu yahay mid lagu ciqaabay inuu guriga wax ka soo barto?
Ardayda uga maqan dugsigooda sababo la xiriira edbin waxaa la siin doonaa qaabab kale oo waxbarasho oo laga helo dugsigooda halkii lagaga siin lahaa Dugsiga Onleenka ah ee MPS. Haddii ardaydu ay rabaan inay si joogto ah iskaga baxaan dugsigooda, waxay markaa mari karaan nidaamka isqorista iyo diiwaangelinta si ay si joogto ah wax uga bartaan Dugsiga Onleenka ah ee MPS.
Ardayda guryahooda aan ka bixi karin waxay dhigan karaan Dugsiga Onleenka ah ee MPS haddiiba ay haystaan ??IEP-ga Waxbarashada Gaarka ah ee I ama II; eeg su'aasha 8 si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
11. Arday ka socda meel ka baxsan MPS ma iska diiwaangelin karaa Dugsiga Onleenka ah ee MPS?
Haa. Iyadoo la isticmaalayo isdiiwaangalin furan, arday kastaa wuu iska diiwaangelin karaa Dugsiga Onleenka ah ee MPS.
12. Iskuulkee ayey ardaydu ka qalin jabin doonaan? Haduu arday ciyaaraha fudud uga qeybgalo dugsi sare ee ku yaala aaggooda xaadiritaanka, miyay helayaan xulashada ah inay ku qalinjabiyaan kuna qaataan xaflada iskuulkaas halkii ay sidaas kaga samayn lahaayeen Dugsiga Onleenka ah ee MPS?
Ardaydu waxay ka qalin jabinayaan Dugsiga Onleenka ah ee MPS waxayna ka qaybgalayaan xafladda qalinjabintiisa.
13. Dugsiga Onleenka ah ee MPS miyuu raaci doonaa isla kalandarka degmada?
14. Goorma ayuu dugsiga u bilaabmi doonaa ardayda?
Maalin waxbarasho waxay u dhaxaysaa 8 subaxnimo - 3 galabnimo Kulanka subaxa ee fasalada K-5 wuxuu noqon doonaa 8 subaxnimo. Ardayda waxaa laga filayaa inay khadka tooska ah soo galaan waqtiyada ku cayiman jadwalkooda maalinlaha ah ee laga helay macallinkooda.
15. Jadwalka ardayda dugsiga hoose sidee u ekaan doonaa? Miyaa la heli doonaa waqti toos ah (isku mar ay ardayda oo dhan khadka soo wada galaan) oo lala yeesho macalinka maalin kasta?
Xaadiraada ardayda ayaa la yeerin doonaa inta lagu gudajiro kulanka subaxnimada. Casharada waxa lagu bixin doonaa waqtiga toos ah (casharo ardayda oo dhan isku mar la siiyo) iyo casharada qofba kiisa ah (casharo ardayda la siiyo wakhtiyo kala duwan) maalinta oo dhan.
16. Jadwalka ardayda dugsiga dhexe sidee u ekaan doonaa? Miyaa la heli doonaa waqti toos ah (isku mar ay ardayda oo dhan khadka soo wada galaan) oo lala yeesho macalinka maalin kasta?
Ardayda dugsiga dhexe waxay wax ku baran doonaan jawi waxbarasho oo isku dhafan halkaas oo shaqooyinka waqtiga tooska ah (casharada ardayda oo dhan isku mar la siiyo) iyo casharada qofba kiisa ah (casharo ardayda la siiyo wakhtiyo kala duwan) ay u abuuri doonaan ardayda jawi waxbarasho oo dabacsan. Macallimiintu waxay qaban doonaan shirar toddobaadle ah oo latalin ah si ay ula xiriiraan shucuurta waxbarasho ee ardayda. Macalimiintu waxay si dhab ah ula kulmi doonaan ardayda usbuuca oo dhan. Tani waxay noqon kartaa qaab saddex ama afar casharro oo rasmi ah, oo lagu daray saacadaha xafiiska, shirarka shaqsiyeed ee ardayga ama casharrada kooxaha yaryar, iyo waxbarashada gacan-wax-ku-qabashada ah.
17. Jadwalka ardayda dugsiga sare sidee u ekaan doonaa? Miyaa la heli doonaa waqti toos ah (isku mar ay ardayda oo dhan khadka soo wada galaan) oo lala yeesho macalinka maalin kasta?
Ardayda dugsiga sare waxay wax ku baran doonaan jawi waxbarasho oo shakhsiga ah (casharada ardayda laka siiyo) kuwaas oo teeramka lagu xawaareyn doono loogu talagalay ardayda si macallimiintu ula socdaan horumarkooda. Macallimiintu waxay martigelin doonaan saacadaha xafiiska maalin kasta ah waxayna taageeri doonaan waxbarashada ardayda iyagoo isticmaalaya sheybaarada, casharrada kooxaha yaryar, iyo shirarka ardayda gaarka ah.
18. Ma jiri doonaan safaro waxbarasho ama waxbarasho dibada loo baxo oo loogu talagalay ardayga khadka tooska ah wax ka barata?
Haa, waxaa jiri doona fursado ah safaro waxbarasho iyo hawlaha fasalka oo foolka-foolka ahaan loo soo xaadiro iyo khadka tooska ah oo labadaba ah.
19. Ardayda iyo qoysasku weligood ma ula kulmi doonaan macallimiintooda fool-ka-fool mise dhammaan macaamiladoodu waxay noqon doonaan kuwa khadka tooska ah?
Ardayda iyo qoysasku waxay fursad u heli doonaan inay macallinkooda ula kulmaan fool-ka-fool inta lagu jiro munaasabadaha jihaynta, fasallada iyo dugsiga, iyo kal-fadhiyada taageerada waxabarashada/sheybaarada.
20. Dugsiga Onleenka ah ee MPS ma bixin doonaa dhammaan koorsooyinka la mid ah kuwa dugsiyada sare ee MPS?
Haa, Dugsiga Onleenka ah ee MPS wuxuu bixin doonaa dhammaan koorsooyinka loogu baahan yahay qalin-jabinta, oo ay ku jiraan koorsooyinka AP, luuqadaha, CTE iyo fursadaha PSEO. Buug-gacmeedka ay ku qoran yihiin koorsooyinka oo dhammaystiran ayaa laga heli doonaa Websaytka Dugsiga Onleenka ah ee MPS goor dhow.
21. Ardaygu ma awoodaa inuu qaato meelaynta tacliinta sare ee (AP)?
Ardayda dugsiga sare waxay awoodi doonaan inay kaqeybqaataan AP-da Ingiriiska, A-da Xisaabta, AP-da Sayniska iyo AP-da Cilmiga bulshada.
22. Fasalka MADOWGA ee Xafiiska Guulgaarista Ardayda Madowga ah ma la heli doonaa?
Haa, fasalka "Kings" iyo "Queens" labadaba waa la bixin doonaa.
23. Majiri doonaan koorsooyinka luuqadaha caalamiga ah oo la heli doono, fasaladee loogu talagalay?
Jabaaniis, Ojibwe iyo Dakota ayaa la siin doonaa ardayda dhigata fasalada 9-12.
24. Ardayda dugsiga sare miyay awoodi doonaan inay iska diiwaangeliyaan Xulashooyinka Isdiiwaangelinta Dugsiga Sare kadib ah (PSEO)?
Haa, Lataliyeyaasha Dugsiga Onleenka ah ee MPS waxay la shaqeyn doonaan ardayda si ay uga taageeraan dhammaan fursadaha PSEO iyo qorshooyinka kale ee dugsiga sare kadib ah.
Xulashooyinka Isdiiwaangelinta Dugsiga Sare kadib ah (PSEO)
25. Waa maxay noocyada taageerooyinka ee la heli karo haddii ardaygayga uu ku adkaado fasalka?
Shaqaalaha Dugsiga Onleenka ah ee MPS waxay bixin doonaan taageero shaqsiyaad iyo taagero loogu talagalay kooxaha yaryar. Casharrada waxaa loo duubi doonaa ardayda si ay mar walba dib ugu daawadaan iskood. Macallimiintu waxay la shaqeyn doonaan ardayda iyo daryeelayaasha si loo abuuro qorshe taageero si loo xaqiijiyo inay ardayda gaaraan guul.
26. Adeegyada caafimaadka maskaxda ma la heli doonaa?
Haa, adeegyada caafimaadka maskaxda waxaa bixin doona shaqaalaha bulshada ee iskuulka ka tirsan. Shaqaalahan bulsheed ee iskuulka, oo ay weheliyaan kooxda caafimaadka maskaxda ee jooga iskuulka, ayaa diyaar u ah inay taageerada caafimaadka maskaxda siiyaan ardayda, iyo sidoo kale inay la-talin siiyaan shaqaalaha iyo qoysaska.
27. Qalabyada iyo adeegyada internetka ma la siin doonaa ardayda u baahan?
Haa, haddii ardaygu aanu haysan qalab u gaar ah waxay heli doonaan iPad (fasallada K-2) ama Chromebook (fasallada 3-12) inta ay ku jiraan Dugsiga Onleenka ah ee MPS. Qoysasku waa inay qorsheeyaan inay raadiyaan internet; xulashooyin internet oo qiimo jaban ayaa laga heli karaa Internet Essentials; hot-isbootyada MPS ayaa loo heli doonaa ardayda aan awoodin inay helaan internet u gaar ah.
28. Ma jiri doonaa taageero tiknoolajiyadeed?
Dugsiga Onleenka ah ee MPS wuxuu shaqaale u qoondeeyey wicitaanada khadka ah ee taageerada tiknoolajiyada inta lagu jiro maalinta dugsiga. Taageero ayaa sidoo kale loo heli karaa qoysaska ku hadla Hmong, Soomaaliga iyo Isbaanishka.
29. Ma jiri doonaa shirarka waalidiinta macalimiinta?
Haa, si la mid ah iskuul kasta oo kale, waxaa jiri doona shirarka u dhaxeeya waalidiinta macalimiinta iyo munaasabado kale oo dugsiga oo dhan ah.
30. Maxay noqon doontaa mas'uuliyadda qoyska ka saaran ardaygooda onleenka wax ka barta?
Qoysasku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan taageerida ardayda wax ka barta internetka. Qoysaska waxaa laga filayaa inay goobjoog ahaadaan oo ay kormeeraan ardaydooda inta lagu jiro maalinta waxbarashada. Taageerada qoysku waxay muujineysaa in waxbarashada ardayda ay tahay mudnaanta koowaad waxayna ka caawineysaa ardayda inay guuleystaan. Markay ardaydu kaqeybqaataan waxbarashada tooska ah ee iskuulka (casharada ardayda oo dhan halmar la wada siiyo) ee ardayda ay la qaataan macallimiintooda, qoysasku waxay ku caawin karaan ardaygooda inay goobjoog u ahaadaan si ay u kormeeraan, iyagoo siinaya boos ka madax bannaan carqaladeyn, oo ay ku jiraan xubnaha kale ee qoyska oo khadka usoo gala. Qoysaska waxaa sidoo kale laga codsanayaa inaysan qaadin sawiro ama aysan duubin fiidiyow inta lagu gudajiro waqtiga waxbarashada ee iskuulka.
Jiheynta qoysaska iyo ardayda waxaa la bixin doonaa bilowga sanadka, iyo kooxaha taageerada waalidiinta iyagana waxaa la bixin doonaa sanadka oo dhan. Kulamada taageerada waalidiinta waxaa loo martigelin doonaa qaab foolka-foolka ahaan looga soo xaadiro iyo si onleen ah, waxaana martigelin doona shaqaalaha taageerada MPS iyo macallimiinta. Waxay daryeel bixiyayaasha siin doontaa fursad ay ku bartaan, su'aalo ku weydiiyaan, kula xiriiraan shaqaalaha Dugsiga Onleenka ah ee MPS, iyo daryeelayaasha iyo waalidiinta kale ee ardayda dhigata Dugsiga Onleenka ah ee MPS. Mawduucyada jihaynta iyo taageerada sanadka oo dhan ah waxaa ka mid ah:
Jadwalka ardayda iyo dejinta jadwalka caadiga ah ee guusha ardayga.
Dejinta goob shaqo iyo istiraatiijiyado.
Barashada aaladaha internetka.
Siyaabaha loola xiriiro macalimiinta.
Dugsiga Onleenka ah ee MPS wuxuu ku talinayaa in heerka dugsiga hoose, qoysaska inay bixiyaan taageero heer sare ah iyo kormeer. Qoysasku waxay gacan ka geystaan ??dejinta jadwalka nasashooyinka, cuntada fudud iyo cuntada caadiga ah, iyo sidoo kale inay la socdaan horumarka ardaygooda maalintii oo dhan iyo inay la xiriiraan macallinka inta badan.
Dugsiga Onleenka ah ee MPS wuxuu ku talinayaa in heerka dugsiga dhexe, kormeerka qoysku uu kala duwanaado iyadoo lagu salaynayo baahida iyo horumarka ardaygooda. Qoysasku waa inay goobjoog ahaadaan maalin kasta oo ay isha ku hayaan horumarka, buundooyinka ardaygooda ayna gacan ka geystaan wada xiriirka u dhaxeeya ardayga iyo macallinka.
31. Ardayda Dugsiga Onleenka ah ee MPS ma ka qayb geli karaan ciyaaraha fudud?
Ardayda Dugsiga Onleenka ah ee MPS waxay xaq u leeyihiin inay isboortiga ku cayaaraan iskuulka bulshada loo qoondeeyay haddii ardaygu buuxiyo shuruudaha waxbarasho. Dhammaan ardayda waxaa looga baahan yahay inay iska bixiyaan kharashaadka gaadiidka ay ku tagayaa ugana soo laabanayaan tababarka. Si kastaba ha noqotee, MPS waxay ardayda u fidin doontaa gaadiid geeya ama kana soo celiya iskuulada lagu ciyaaro kulamada iyo tartamada banaanka loo aado.
32. Barnaamijyo noocee ah oo dugsiga kadiba ah ayaa loo heli karaa ardayda dhigata Dugsiga Onleenka ah ee MPS?
Ardayda Dugsiga Onleenka ah ee MPS waxay barnaamijyada iskuulka kadib ah kaga qeybqaadan karaan iskuulka loo qoondeeyay. Ardayga waa in laga diiwaangaliyaa barnaamijyada iskuulka kadib ah sida ALC iyo/ama Waxbarashada Bulshada MPS (MPS Community Education).
33. Sidee ardaygu ku ogaadaa iskuulka bulshada ee loo qoondeeyey midkuu yahay si uu u ogaado iskuulka uu kaga qeybqaadan karo ciyaaraha fudud iyo barnaamijyada iskuulka kadib ah?
Qoysasku waa inay la xiriiraan Adeegyada Meelaynta Ardayda si ay u ogaadaan iskuulka bulshada ee loo qoondeeyey ama waa inay isticmaalaan Qeybta Raadinta Iskuulka ee sanduuqa buluugga ah ee ku yaal xagga sare ee boggan si ay u raadiyaan dugsiga iyadoo lagu salaynayo cinwaanka guriga ee ardayga.
34. Sidee ayey qoysasku u go'aansan karaan haddii Dugsiga Onleenka ah ee MPS uu yahay xulashada saxda ah ee ardaygooda?
Si ay u go'aansadaan in Dugsiga Onleenka ah ee MPS uu ku habboon yahay ardaygooda, qoysaska waa inay dib u eegaan Xogta soo socota ee laga helo Bartaha Internetka.
Macluumaadka Ardayga Onleenka Wax ku Barta
Ardaydu waxay wax u bartaan siyaabo kala duwan. Ardayda MPS waxay heleen fursad ay ku bartaan kuna horumariyaan xirfadaha aaladaha teknolojiyadda, softiweerka iyo xirfadaha waxbarashada khadka tooska ah iyadoo la isicmaalayo waxbarashada khadka tooska ah ee degmada oo dhan ah. Dugsiga Onleenka ah ee MPS wuxuu fursad weyn u yahay ardayda qaarkood inay sii wataan horumarkooda tacliimeed ee K-12 iyadoo la isticmaalayo qaab waxbarasho oo ku habboon qaababkooda waxbarasho.
Kahor intaan go'aan laga gaadhin qaabka waxbarasho ee u wanaagsan iyaga, ardayda iyo waalidiintu waa inay dib u eegaan sharraxaadda ardayga khadka tooska ah wax ka baranaya ee hoos ku qoran oo waa inay ka fekeraan haddii qaabka waxbarashada khadka tooska ah uu u noqon doono midka ugu fiican:
Waxaan dooranayaa qaab waxbarasho oo khadka tooska ah maxaa yeelay qaabkayga waxbarasho ayaa sifiican ula jaanqaadaya jawi waxbarasho oo khadka tooska ah.
Waan ogahay in fasalkayga khadka tooska ah laga yaabo inuu leeyahay caqabado ka duwan fasallada qof ahaan looga xaadiro sababo la xiriira aaladaha la isticmaalo.
Aniga ayaa is-dhiirageliya waxaan feejignaan fiican u yeelan karaa dhamaystirka howlaha iyo mashaariicda.
Waan awoodaa inaan si wanaagsan u raaco tilmaamaha waxaanna weydiin doonaa su'aalo markaan u baahdo in wax la ii cadeeyo.
Waxaan jecelahay inaan maanta wax qabsado oo aanan sugin ilaa berri.
Si fudud uma niyad jabo, xitaa markaan wajaho caqabado.
Ma seegi doono isdhexgalada shaqsi ahaaneed ee maalin walba aan la yeesho macallinkayga iyo asxaabteyda isla markaana waxaan yeelan doonaa fursado kale oo aan dadka ku dhax gelin.
Waxaan ku qanacsanahay inaan ugu yaraan 6 saacadood maalintiiba u qoondeeyo fasalkayga khadka tooska ah oo ay ka mid tahay inaan maalin kasta wakhti (dhab ah) la qaato macallinkayga iyo waqti aan ku dhammaystiro shaqooyinka oo ay ka mid noqon karaan daawashada fiidiyowyada iyo ka hawlgalka aaladaha waxbarashada sida Lexia, Dreambox, iStation iwm.
Waxaan bartay ama diyaar u ahay inaan barto istaraatiijiyado akhris oo iga caawin kara inaan akhriyo qoraalada adag iyo/ama waxaan diyaar u ahay inaan la xiriiro macallinkayga si uu u gacan uga geysto fahamkayga wax aqrinta.
Waxaan leeyahay xirfadaha kombiyuutarka ee aasaasiga ah waxaanan isticmaali karaa softiweerka ka shaqeynta Word-ka, waxaan soo dejin karaa softiweerka, rakibi karaa softiweerka, waxaan isticmaali karaa biraawsar webka, iwm.
Waxaan heli karaa kumbuyuutar kuxiran internetka waxaan haystaa qorshe kale oo aan isticmaali karo haddii ay wax ku dhacaan kombuyuutarkayga.
Waxaan ku qanacsanahay "aalada khadka tooska ah" iyo isticmaalka Seesaw iyo/ama aaladaha Google Classroom.
Waan ogahay in fasaladayda internetka laga yaabo inay leeyihiin caqabado ka duwan kuwa fasallada qof ahaan looga xaadiro sababo la xiriira isticmaalka aaladaha khadka tooska ah.
Waxaan awoodaa inaan si madaxbanaan u shaqeeyo anigoo helaya tilmaamo yar.
Waxaan leeyahay xirfado wanaagsan oo maareynta waqtiga ah oo ii oggolaanaya inaan jadwaleysto waqtiyo cayiman usbuuca oo dhan si aan uga shaqeeyo koorsada(yada) onleenka ah.
Si igu filan ayaan isugu diyaarin karaa una baran karaa imtixaanada.
Waxaan si fiican macalinkeyga ugu gudbin karaa wixii su'aalo ama walaac ah ee aan qabo.
Waxaan ku qanacsanahay inaan naftayda rabitaankeeda ku muujiyo qoraal.
Waxaan jecelahay inaan maanta wax qabsado oo aan berri sugin.
Ma seegi doono isdhexgalada shaqsi ahaaneed ee maalin walba la yeesho macallinkayga iyo asxaabteyda isla markaana aan yeesho fursado kale oo aan dadka ku dhax galo.
Waxaan ku qanacsanahay inaan ugu yaraan 6 saacadood maalintiiba u qoondeeyo fasalkayga khadka tooska ah oo ay ka mid tahay inaan maalin kasta wakhti (dhab ah) la qaato macalinka(macalimiinta) koorsada, waqti aan ku akhristo casharada/fiidiyowyada, wakhti aan ku dhamaystiro shaqooyinka koorsada, wakhti aan uga qeybqaato sheekooyinka iyo doodaha, iwm.
Waxaan ku raacsanahay in koorsooyinka onlaynka ah ay ka dhib badan yihiin fasallada qof ahaan looga xaadiro.
Waxaan bartay ama diyaar u ahay inaan barto istaraatiijiyado akhris ah oo iga caawin kara inaan akhriyo qoraallada adag iyo/ama waxaana diyaar u ahay inaan la xiriiro shaqaalaha si ay iiga caawiyaan fahamkayga akhriska.
Waxaan ku qanacsanahay "aaladaha khadka tooska ah," iimayl, dirista lifaaqyada, doodaha xarkada leh, qolalka lagu sheekeysto, iwm.
Waxaa laga soo xigtay https://www.fairmontstate.edu/academics/distancelearning/successful-student